Забур 102 CARS - Nnwom 102 AKCB
Aberante mmɔborɔni mpaebɔ. Osu kyerɛ Awurade bere a ɔwɔ ahohia mu.
1Awurade, tie me mpaebɔ;
na ma me mmoa ho sufrɛ nnu wʼanim.
2Mmfa wʼanim nhintaw me
bere a mewɔ ahohia mu.
Brɛ wʼaso ase ma me;
na sɛ misu frɛ wo a, gye me so ntɛm.
3Me nkwanna reyera te sɛ wusiw;
me nnompe adɔ sɛ nyansramma.
4Me koma abotow na akisa sɛ sare;
na me kɔn nnɔ aduan.
5Mʼapinisi dennen nti
maka ɔhonam ne nnompe.
6Mete sɛ sare so patu,
te sɛ patu a ɔte nnwiriwii mu.
7Meda hɔ a, mʼani gu so; mayɛ sɛ
anomaa bi a ɔno nko ara si ɔdan atifi.
8Da mu nyinaa mʼatamfo bɔ me akutia.
Wɔn a wodi me ho fɛw no bɔ me din de dome.
9Mede nsõ ayɛ mʼaduan
na mede nusu fra me nsu mu
10esiane wʼabufuwhyew dennen no nti,
woama me so, ayi me asi nkyɛn.
11Me nkwa nna te sɛ anwummere sunsuma;
na mehyew sɛ sare.
12Nanso wo Awurade, woyɛ ɔhene daa daa;
na wo din a ahyeta no te hɔ daa awo ntoatoaso nyinaa mu.
13Wobɛsɔre na woahu Sion mmɔbɔ;
bere adu sɛ wuhu no mmɔbɔ;
bere a wohyɛe no aso.
14Nʼabo som bo ma wʼasomfo;
ne mfutuma hyɛ wɔn awerɛhow.
15Amanaman no besuro Awurade din;
asase so ahemfo nyinaa bedi wʼanuonyam ni.
16Awurade bɛkyekyere Sion bio,
na wapue wɔ nʼanuonyam mu.
17Obetie mmɔborɔfo mpaebɔ;
na ɔremmu nʼani ngu wɔn sufrɛ so.
18Monkyerɛw eyi mma nkyirimma,
sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn a wonnya nwoo wɔn no bɛkamfo Awurade;
19“Awurade hwɛɛ fam fi ne kronkronbea wɔ ɔsoro hɔ;
ofi ɔsoro hwɛɛ asase,
20sɛnea ɔbɛte nneduafo apinisi,
na wɔagyaa wɔn a wɔabu wɔn kumfɔ no.”
21Enti wɔbɛpae mu abɔ Awurade din wɔ Sion
na wɔakamfo no wɔ Yerusalem,
22bere a amanaman ne ahenni ahorow
behyia mu na wɔasom Awurade.
23Ɔmaa me yɛɛ mmerɛw wɔ bere a merenyin.
Otwaa me nkwa nna so.
24Enti mekae se,
“Me Onyankopɔn, mfa me nkɔ, wɔ me nkwa nna mfimfini;
wo mfe wɔ hɔ daa kodu awo ntoatoaso nyinaa mu.
25Mfiase no wotoo asase fapem,
26Ne nyinaa betwa mu na wo de, wobɛtena hɔ daa;
wɔbɛtetew te sɛ atade.
Wobɛsesa wɔn te sɛ ntama,
na wɔbɛtow wɔn agu.
27Nanso wote sɛnea wote,
na wo mfe to rentwa da.
28Wʼasomfo mma bɛtena nkwa mu wɔ wʼanim;
na wɔn asefo ase betim wɔ wʼanim.”
AKCB : Nnwom 102